Ho ampy handrisihana an-dry zareo Tseky hanao vaksiny COVID ve ny tononkalo? · Global Voices teny Malagasy
Doka ataon'ny governemanta tseky handresena ny tahotra tsy hanao vaksiny
Voadika ny 30 Desambra 2020 3:31 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, 日本語, Italiano, Français, Nederlands, українська, বাংলা, عربي, Português, македонски, English
Satria efa azo sitrahana ao anatin'ny Fiombonambe Eorôpeàna ankehitriny ny vaksiny hiadiana amin'ny COVID-19, nandefa fanentanana iray vaovao ny governemanta tseky mba handresena ny tahotra sy ireo ahiahy momba ny fanaovana vaksiny. Tamin'ity indray mitoraka ity, toerana iray tsy noheverina akory no nakàn'ilay fanentanana ny aingampanahiny ho an'ireo fanambaràna momba ny fahasalaman'ny daholobe: ny tononkalo.
Ny 27 Desambra, namoaka hafatra iray ny kaonty Twitter an'ny Biraon'ny Governemanta Tseky, nahitàna lahatsary fohy 30 segondra izay azo jerena ato:
Tonga eto amin'ny Repoblika Tseky izao ny fatra voalohany amin'ny vaksiny, ary dia efa manomboka manao vaksiny an'ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo zokiolona isika. Ny fanaovana vaksiny no fomba mahomby indrindra ho entina manakana amin'ny fotoana maharitra an'ilay valanaretina, ary hiverenantsika indray amin'ny fiainantsika teo aloha.
Ireo sary isankarazany mampiseho toepiainana mahazatra amin'ny fiainan'ny olona sy ny sôsialy no natambatra tao anatin'ilay lahatsary narahana ny famakiana ilay tononkalon'i Jiří Wolker, Tseky iray mpanoratra tany ampiandohan'ny taonjato faha-20, nivoaka avy tao amin'ny sekoly fianarana tononkalo natao ho an'ireo mpitrongy vao homana.
Hoy ny tononkalo nosoratany:
Maraina iray menamenatra mifafy amin'ny endritsika
toy ny nofinofin'ireo ala misokatra, ireo lohasaha sy tendrombohitra am-paratazana.
Finoana iray hafahafa mahatonga ny zavatra rehetra ao anaty fanahintsika ao hangiana,
eny fa na ny hirifiry mivoa-drà sy ny fanamby mavesatra aza.
Faly sady tony isika miraoka ahitra tsy mikiraro
eo ambony ahitra mamelombelona aina, lohasaha maitso mavana anaty ala
Mamiratra noho ny ranonando vao maraina ireo ahitra tanora.
Nitomany angamba isika, — fa ankehitriny isika te-ho velona!
Kanefa, ny ampahatelo farany amin'ilay tononkalo niaindohana dia nosoloin'ilay lahatsary tamin'ny tenifanevan'ny fanaovana vaksiny hoe “A budeme. Tak jako dřív! Díky očkování” izay afaka adika ho “Ary hi[aina] isika. Toy ny tany aloha! Noho ny fanaovana vaksiny.”
Nahazo jery 20.000 ilay lahatsary tao anatin'ny andro roa latsaka monja, ary noresahana be teny anatin'ireo gazety mahazatra rehetra sy ireo tranonkalam-baovao. Ny tena fanontaniana dia raha tena ho ampy tokoa handrisihana ireo Tseky hanao vaksiny io, izay, araka ny fanadihadiana farany, dia marobe tokoa — hatramin'ny roa ampahatelon'ny vahoaka 10 tapitrisa — no manohitra an'ilay fanaovana vaksiny. Raha tany amin'ny Martsa 2020, matetika nolazaina fa isan'ireo firenena vitsy nahavita nifehy ilay valanaretina ny Repoblika Tseky, fa nony tonga ny lohataona dia izy no lasa firenena faharoa manana ny isa ambony indrindra manerana ny tany.
Araka izany, ho ampy ve ny tononkalo ho entina hanova ny tantana sy hampitsimbadihana io taha ambony be amin'ny valanaretina io?